Blog-Kubvarura: Kufungidzira + Innovation | Martech Zone
Chishanu, July 6, 2007 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Duane kubva Kufungidzira + Kugadzira anga ari muverengi akanaka uye ndiye wekutanga kwandiri blog-tippee saka ndiri kuzomupa mubayiro nemamwe matipi makuru ekuti aongorore zvakanaka blog yake (iyo yatove yepamusoro-notch!):
Heano matipi angu eblog yako:
Majini ekutsvaga anonyatsoda kukwirisa masosi kumusoro kana zita resaiti racho richienderana nerezita rezita. Ndicho chimwe chezvikonzero nei saiti yangu isingazombotarisa kumusoro kwe "Kushambadzira neTekinoroji"… haifanane ne "douglaskarr". Iwe une inonakidza dura asi rakasiyana blog zita. Zvichida iwe unogona neimwe nzira kusanganisa "kugadzira" uye "traction" mumusoro wenyaya weblog rako (kana iwe uchida kuchengeta iyo blog zita).
Kuchengeta vanhu vakatenderedza, ini ndaikurudzira iyo Inoenderana Maposi Plugin uye isa zvakabatana zvinoenderana pazasi pechimwe nechimwe chemashoko ako. Nenzira iyi vanhu vanokuwana iwe kuburikidza neKutsvaga Injini vanoverenga zvaunotumira uye kana vasingawani chaizvo zvavanoda, vanogona kunamatira kune zvimwe zvinyorwa zviri pachinhu chimwe chete. Izvi zvichabatsirawo ne kubatanidza kwakadzika Yekutsvaga Injini Chinzvimbo.
Une vaviri RSS mabhatani achirwira kutarisa kwangu. Ini ndinotenda iwe unogona zvirinani kukwezva vanhu kune chako chikafu nekushandisa yakasarudzika orenji RSS feed zvidhori mune iri kurudyi ikholamu panzvimbo yemusoro webhuruu mifananidzo. (Ini zvakare ndinokurudzira kushandisa FeedBurner kuyera mafidha ako uye nekuwedzera zvimwe zvekuwedzera, senge kunyoreswa kweemail)
Zvako zvinyorwa zvakanaka, zvipfupi uye zvakanyorwa-mushe. Zvakare, iwe une chikomborero chekugara mune rimwe remaguta akanakisa paPlanet - Vancouver ichiri kutora # 1, zvakadaro. Match Kufananidza nemabatiro ako ekunyora nekusimudzira imba yako, ndingafarire kukuona iwe uchiwana mufananidzo wakanaka weToronto, pamwe iri rakabatikana mudenga usiku, uye woisa iyo ine musoro wemusoro uko kune hombe bhuruu musoro wemusoro uri. Iyo yaizosimudzira theme yako. Chimwe chinhu chakafanana nemufananidzo uri paPeji Peji chingave chakanakisa - chinofara, chine mavara… uye chinoratidza kumwe kumhanya-mhanya uku!
Anonakidza Blog, Duane! Tine zvakawanda zvekudzidza kubva kwauri - zvese nedzidzo yako yepamutemo muRuzhinji Hukama, Kushambadzira, uye Physiology uye rako razvino basa neako Kushambadzira Agency. Pasina mubvunzo urikutora hurukuro kuenda padanho rinotevera!
Blog-Kubvarura: Aberrant Absurdity